दस महिनामै फर्किए जिदान — Bhugolnews
म्याड्रिड। जिनेदिन जिदानले २९ मिनेटसम्म विभिन्न प्रश्नको सामन गर्नुपर्यो । उपस्थित सबैको प्रश्नको सार दुईवटा थिए– अहिले किन ? र अब के ? सोमबार सान्टियागो वर्नबाउको खचाखचपूर्ण हलमा राउल र रोबर्टो कार्लोस अगाडिको सिटमा बसेका थिए । आधिकारिक घोषणाको डेढ घण्टापछि पत्रकारले प्रश्नका लागि पहुँच पाएका थिए ।
सोलारीको बहिर्गमन निश्चित थियो । तर ला लिगाको बाँकी ११ खेलका लागि उपयुक्त विकल्प आवश्यक बन्यो । मड्रिडको संकटपूर्ण समयमा कोही पनि त्यो जोखिम हासिल गर्न तयार देखिएका थिएनन् । परिस्थिति कसरी बदलियो त रु भन्ने प्रश्नको जवाफमा जिदानले भने, ‘जब अध्यक्षले मलाई बोलाउनुभयो र मलाई लाग्यो– जाउँ । जिदान स्पेनमै बस्छन् । उनले केही खेलहरू पनि हेरेका छन्, जबकि उनका तीन छोराहरू क्लबमै विभिन्न स्तरमा फुटबल खेलिरहेका छन् । बाहिरबाट देखिएजस्तै आफ्नो पुनरागमनलाई उनले पनि करिअरमा छलाङको रूपमा मान्न सक्दैनन् । तर पनि उनका लागि सबैभन्दा बढी लालच यो हुन सक्छ कि टोली आफ्नो स्वभाविक लय भेट्टाउन असफल छ । महान् प्रशिक्षक र खेलाडीमा हमेसा एक आत्मविश्वास हुन्छ । उनीहरूका लागि जुनसुकै समस्या पनि निकै ठूलो हुँदैन ।
साफ महिला च्याम्पियनसिप : नेपाललाई १-० को अग्रता
क्रिकेट टिमको मालिक बनिन् रेखा